वीर अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जागेश्वर गौतमको सरुवा - worldwidetvnepal
वीर अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जागेश्वर गौतमको सरुवा
वि.सं.२०७८ साउन २२ शुक्रवार ०९:५८
सरकारले अन्ततः कोभिड—१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल) का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जागेश्वर गौतमको सरुवालाई सदर गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गौतमसहित उच्च अधिकारीको सरुवा ‘होल्ड’ गराएकोमा गौतमको भने अन्ततः सरुवा नै गरिएको हो । गौतमलाई प्रसूति गृह पठाइएको छ ।
उनको ठाउँमा डा. भुपेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्त गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री देउवाले आज डा. बस्नेतलाई अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा नियुक्त गरेको उनको भनाइ छ ।
यसअघि सोमबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले डा। रुद्र मरासिनीलाई कोभिड—१९ युनिफाइड अस्पतालको प्रमुखमा सरुवा गरेको थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले हाल आएर राज्यमन्त्रीको निर्णयलाई हस्तक्षेप गर्दै डा. बस्नेतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा नियुक्त गरेका हुन् । यसअघि डा. बस्नेत वीर अस्पतालको निर्देशक भइसकेका छन् ।
News Views: 255
माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक ५५ जनाले बोलेर सकियो
भ्वाईस अफ नेपालको भोटिङ्ग आज राती ८ बजे सम्म खुल्ला, तारा श्रीष मगरलाई जिताउन कसरत